Cadastar Dawladeed, habkani waa mid habboon - Geofumadas
Kastamka degmada, qaabkani waa mid habboon
Ogast, 2010 cadastre, GPS / Qalabka
Dhowr sano oo cadastre ah, su'aashani waa mid aad u badan. Habkee ayaa ka fiican inuu sameeyo cadastare?
Waxaan qirsanahay in tani aysan ahayn mid la miiro, sababtoo ah waxaa jira xaalado kala duwan oo loo baahan yahay in la tixgeliyo, habkastana waxa uu yeelan karaa doorsoomayaal ka duwan dhulalka kala duwan. Sidaa darteed si aad u iftiimiso boostada, jimicsiga qaar ka mid ah dhinacyada laga yaabo in ay faa'iido u leeyihiin go'aamada, ka gudubka wax soo saarka dood wadahadal laba maalmood ka hor.
Sababta oo ah cadawga dawladda. Tani waxaan caddaynayaa, sababtoo ah boostada waa la dabaqayaa deegaanka, oo ay degmadu rabto in ay ka shaqeyso dhadigeeda, iyada oo ujeeddadeedu tahay ama taageerada mashruuc wada shaqayn ah. Ma khusayso mashruuc casri ah oo ku saabsan heer gobol ama heer qaran, oo uu hogaaminayo hay'ad dhexe, kaas oo yeelan doona shuruudo wanaagsan oo lagu fulinayo mashruuca iyo lacago dheeraad ah si loo isticmaalo ... inkastoo sidoo kale tilmaamooyin dheeri ah oo dheellitiran.
seenyo uu yahay, haddaba sidaas daraaddeed, degmo, size si joogto ah, kaas oo noqon doona ugu badnaan ku saabsan 5,000 dhismayaasha magaalooyinka ee magaalooyinka waaweyn, oo ku saabsan 4 beelaha waaweyn, laakiin in ka yar guryaha 1,000 oo kale miyiga ama wax kasta oo aad ugu yeedhaan Waxaa intaa dheer, lagu duubay.
Cadastre waxa loogu talagalay. Tani waa muhiim in la qeexo, sababtoo ah shuruudaha saxda ah ee cadawga oo leh hab sharci ah ayaan la mid ahayn haddii diiradda kaliya tahay maaliyad ama xakamaynta isticmaalka dhulka. Sidoo kale haddii uu jiro a habka qiimeynta, cabbiraadda dhismayaasha ama qiimeynta dalagga joogtada ah waxay u baahan tahay shuruudo kale si loo hirgeliyo hannaanka waxtar leh.
Muhiimadda degmadaan aan laheyn cadastre maaha mid sax ah, waa inay noqotaa meel lagu isticmaalo. Sidaa daraadeed waa in aan tixgelinnaa hababka sii waaraya, oo gacan ka geysanaya joojinta kacdoonka dhamaystiran ee degmada, si loo isticmaalo, loo cusbooneysiiyo loona hagaajiyo saxnimadeeda.
Qaar ka mid ah hababka aan isku dayay. Afartii sano ee la soo dhaafay waxaan isku dayey waxyaabo kala duwan, iyada oo ku xidhan xaaladaha degmada, halkan waxaan ku soo koobayaa qaar:
Sawirqaadir. In yar oo ka mid ah, magaalooyinka magaaladan habkan ayaa hoos u dhigaya xumaan, badanaa sababtoo ah ma aha mid dhaqaale marka loo eego saxnimadeeda. Shirkadna ma dhigi doonto duulimaad 10,000 meel sare oo magaalo ah, taas oo ka dhigan in degmada oo dhan ay tahay mid aan la qabsan karin dhaqaale ahaan. Ka dibna haddii sawir-qaadid lagu isticmaalo magaalooyinka waa mar walba lagama maarmaan tahay in la qiyaaso caqabadaha iyo ugu dambeyntii saxda ahaanshaha ma fiicnaan meelaha meelaha ay dadku ku qaataan mindida 10 centimeters. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha miyiga ah, waa wax aad u macquul ah sababtoo ah caymis weyn ayaa la gaarey iyada oo aan loo baahnayn in la safro xuduud kasto oo sax ahna waa mid ku filan tan iyo markii suuqyadu leeyihiin meelo waaweyn.
Sawir gacmeedka + GPS. Haddii aad leedahay qotofoto waxaad si toos ah ugu codsan kartaa miyiga oo natiijooyin aad u wanaagsan leh. Caddeeyo, waxaan la hadlay oo ku saabsan orthophoto ka sawir dhinaca cirka ah, sida image satellite orthorectified hadda ayaa wax ka yar hal mitir pixel ayaa dhabtii aad u badan meelaha of muuqaalka guud ee dhulka aan joogto ahayn, waayo, in nimcada fiican isticmaalka ortho Google. In dhaqanka waxaan arkay in la mideeyo isticmaalka weyneeyey (orthophoto) daabacan iyo GPS low-sax (Garmin 3 5 in mitir) keentaa natiijooyin badan wax ku ool ah si ay u riix sawiro anteenada stereoscope ka dibna marayay, waxa uu furasho.
Ma dhahayo ay yihiin tuuro laakiin su'aal mashaariicda degmooyinka yar yar, in ay saamayn xarumaha kale ee haatan ogolaan GPS in uu soo bandhigo raster ama maxaa yeelay, waxaad had iyo jeer ma noqon karo laga heli karo xitaa ama khayraadka aadanaha ay awoodaan in ay ka adkaadaan farsamada. Sawirada feer keentaa faa'iidooyinka ku lahayn arrimaha sax, maxaa yeelay, kaliya width qalinka farsamo on 1 a orthophoto daabacay: mitir 10,000 10 noqon doontaa qalad ka badan horay u ururay software Orthorectification. Sidoo kale su'aasha in darafka muunad stereoscope buuraha leh oo si fiican, laakiin ma aha on print ah, waxaa la tuuray, sababtoo ah dhaqanka muujinaysaa in tani ay tahay suuragal ah in farsamo ah oo ka soo habka caadiga yimaado, laylis ah ma arag wax labadaba waxay u fiicnaan doontaa in la qaato laba dhibcood oo GPS ah si aad u hesho rikoodhada. Ka dibna fasiraadda faahfaahin kale sida isticmaalka dhulka, farsamooyinka dareenka fog ee hadda jira waxay qabtaan shaqo ka fiican oo ka raqiisan kala-saarid kormeer.
GPS + koobi. Habkani waa wax aad u macquul ah haddii aad haysato lacag yar. Waxaan u isticmaali jiray magaalooyinka, iyada oo ka faa'iideysanaya dhowr ka mid ah GPS-da si sax ah u shaqeynaya si ay u hirgeliyaan jidadka jidadka, oo isticmaalaya masaafo si loo xiro dhinacyada. Sida cajalad loo isticmaalo in lagu cabbiro dhinacyada, qaladka waxaa loo wareejiyaa wadada, isaga oo ka tegaya qiyaasta xuduudaha ee xuduudaha 10 centimeters iyo ixtiraamka buuxa ee gawaarida leh GPS meel u dhow tareenka. Waa inaad qiyaastaa miisaaniyada oo aad qaadataa koorsooyinka leh saddexagaladood. Maaha mid ku haboon haddii sahanku uu leeyahay saameyn sharci ah, haddii hantida hantida ama caddaynta caddaynta leh qiime sharciyeed; waayo, taasi waxay ku jiri doontaa kormeerka beeraha xilliga codsiga.
GPS + xarun guud. Habkani waa mid shaqeynaya, maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa saxda wanaagsan iyo macluumaadka Xaddiga 3 si dhakhso ah iyo ka dibba waxay faa'iido u yeelan doonaan. Waxay u baahan tahay laba gaas oo GPS ah si ay u dherereyaan laba meelood oo ugu horreeya, iyo in ay qaataan meelo yar oo aan ku filneyn oo kantarooli kara oo ka hortagaya qalad ee aragtida qaldan ee danbe. Ma aha lagama maarmaan in la helo saldhigga guud, maadaama uu kiraysan karo, iyo sidoo kale qodobada GPS oo shaqsi ahaan loo kiraysan karo. Lacagta ayaa had iyo jeer loo baahan yahay in la qiyaaso, kaas oo lagu taageeri karo naafeynta, kulaylka ama xaglaha xayawaanka, taas oo ah midka ugu habboon.
Taas oo aan ku talinayo.
Haddii ay ii ahayd inaan go'aan ka gaaro, magaalooyinka waxaan tagi lahaa wadarta guud. Qaado carruurta qaar ka mid ah qalabka isku-dubbaridka ah ee xisaabinta, iyaga oo tababara kuna sii daaya si ay u shaqeeyaan. Sidoo kale degmada ama urur ama dallad degmooyinka, si ay u bartaan saldhiga a total in socdaa by $ 7,000 ma aha maal xun, tan iyo isticmaalka shishadiisa sahan cadastre, stakeout ama fulinta mashaariic injineernimada waa maalgashi fiican. Adiguna waa inaad raadsataa tababbarka kheyraadka aadanaha.
Taasna waxaan ka hadlayaa saldhigga caadiga ah, robotics ma khuseeyaan deegaannada foosha ee riwaayad ahaan raqiis ah iyo meesha aad isha ku heyso indhaha aad garaacayso telefanka, telefoonka gacanta ... iyo haddii aad weli tahay sharaf.
Ugu dambeyn, qof kasta oo go'aan ka gaaraya habka waa in uu fahamsan yahay in khariidadda cadastu ay had iyo jeer noqoto wax aan fiicnayn oo muuqaal dhab ah. Hase yeeshee, saxda ahmiyadeena iminkana waa dhowr sano waa la weydiin doonaa iyada oo la raacayo qulqul-darraansho la xidhiidha buurta Mars.
Habka ugu fiican ayaa ah midka la sii wadi karo dhaqaalahiisa, maalgashadeeda dib-u-soo-kabashada muddada gaaban iyo tan aan ku yeelan doono degmada oo dhan oo kicinaysa laba dawladood oo keliya.
Post Previous«Previous Egeomates, photos kaliya
Post Next Miyaanu qabannaa xarun dhan robot?Next »
3 Jawaab: "Kastamka degmada, qaabkee ayaa habboon"
Adeerkey wuu dhintay, aniguna waxaan bedelay magaca, waxaan sii wadi doonaa bixinta.
seenyo uu yahay, haddaba sidaas daraaddeed, degmo, size si joogto ah, kaas oo noqon doona ugu badnaan ku saabsan 5,000 dhismayaasha magaalooyinka ee magaalooyinka waaweyn, oo ku saabsan 4 beelaha waaweyn, laakiin in ka yar guryaha 1,000 oo kale miyiga ama wax kasta oo aad ugu yeedhaan Waxaa intaa dheer, lagu duubay
4,787 magaalo magaalo, 2,138 magaalo magaalooyinka yaryar, 18,000 wareegyo miyiga ah.
Haa, dhinaca dhinaca balli.
Haa, ee sanadaha 8, oo leh habka jimicsiga / heshiiska / bandhigidda suuqgeynta muddooyinka sanadaha 5 iyo dib u maalgalinta qeyb ka mid ah maalgashiga la helay, haddii uu jiro canshuur guri.
Degmo badan oo waawayn, waxay ku jiri doonaan lacag dheeraad ah, laakiin maahan waqti dheer.
Uribe isagu wuxuu leeyahay:
"Miyaa degmadu dhammaanteed ku dhisi doonnaa laba xilli oo dawladeed oo keliya?»
Mudo intee le'eg ayay tahay, sirta, cateriga?